နောဧသည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီး အခြားသောသူတို့ဝိညာဉ်ပျောက်ခဲ့ရသည် | Why Noah Was Saved and The Rest Were Lost | Real Conversion
၂၀၁၂၊ ဇွန်လ ၁၇ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့၊ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
“လူသားသည်ကြွလာသောအခါ နာဧလက်ထက်၌ဖြစ်သကဲ့သို့ ဖြစ်လိမ့်မည်” (မဿဲ၂၄း၃၇)။
ဒေါက်တာဂလီဆန်အယ်လ်အာချာသည် ပရိန်စေတန်၊ နှင့် ကျောင်းတော်မှဘွဲ့အပ်နှင်းခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။ မြို့၌ရှိသော ၌ ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းတော် မြတ်နှင့်ပါတ်သက်သော ပါမောက္ခတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာအာချာသည် တရုတ်လူမျိုးသင်းအုပ်ဆရာဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ဆရာ ဒေါက်တာလင်း၏ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်လည်းဒေါက်တာ အာချာကိုသိခဲ့၏ ထိုဆရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၌လည်း တရားဟောပြောခဲ့ သေးသည်။ ရှင်မဿဲ၂၄း၃၇-၃၉ကျမ်းပိုဒ်၌ပါသော နောဧနှင့်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းအ ကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ယေရှုသည် ကမ္ဘာဦးကျမ်း၌ မှတ်တမ်းတင်ထားသောအ ကြောင်းအရာကို ဓမ္မသစ်ယုံကြည်သူများတို့ လက္ခံယုံကြည်ရန်ထပ်မံ၍ ဖေါ်ပြထား ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာအာချာပြောကြားခဲ့သည်မှာ “နောင်အခါ အစားဝင်နေရာ ယူပေးမည့် ယေရှုကိုကြိုတင်ပြီး ပုံရိပ်ကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၌မှတ်တမ်းတင်ထားသကဲ့သို့ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်ပါတ် သက်၍ ယေရှု၌ပြည့်စုံရန်ဖြစ်သည်” (Gleason L. Archer, Ph.D., Encyclopedia of Bible Difficulties, Zondervan Publishing House, 1982, p. 21). ရေလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ ဒေါက်တာအာချာပြောကြားသည်မှာ “ပထဝီဆိုင် ရာအထောက်အထားသည် အင်မတန်အရေးပါသည်၊ သမ္မာကျမ်းစာကို ငြင်းဆန် သောသိပ္ပံပညာရှင်များက ၎င်းဖြစ်စဉ်ကို ခဲယဉ်းစွာ ဖေါ်ပြခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့တိ ကျသော သက်သေအထောက်အထားကိုမူ အကျဉ်းချုံးဖေါ်ပြထားပြီး၊ (ရေးလွှမ်း မိုးခြင်း)ပျက်စီးခြင်းအကြောင်း အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်လာမည့် ကြီးမားသောပုံရိပ် ကိုကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်း၇တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။” (ငဘငိ.ယ စ. ၈၂). ထိုအပြင် ဒေါက်တာအာချာက ကြီးမားသော ရေလွှမ်းမိုးခြင်းရှိခဲ့သည်ဟု ပထဝီဆိုင်ရာသက် သေသာဓကရှိနေသည်ဟုဆိုပါသည် (ငဘငိ). ဒေါက်တာအာချာပြောကြားသည့် အတိုင်းကြီးမားသောရေလွှမ်းမိုးခြင်း နောဧတို့အချိန်အခါ၌ ရှိခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ် လည်းယုံကြည်ပါသည်။
နောဧ၏သဘောFသည် ကြီးမားလွန်းလှပါသည်။ ဒေါက်တာဟန်နရီအမ်မိုရီး ပြောကြားတွင်၊”ရှေးဟောင်းအတိုင်းတာ (ခကဘငအ) သည် ၁၇.၅လက်မရှိသည်(အနည်း ဆုံးခန့်မှန်းချေ) ထိုသဘောFသည် သိုးကောင်အရွယ်အစား တိရိစ္ဆာန်အကောင် ၁၂၅၀၀၀ကို သယ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ထိုသဘောFထဲတွင် မြေတိရိစ္ဆာန်အမျိုးအ မည်ပေါင်း၂၅၀၀၀ခန့်သာ သယ်ဆောင်ခဲ့မည်၊ အသေကောင်ဖြစ်စေ၊ အရှင်ကောင် ဖြစ်စေ၊ စောနကဖေါ်ပြထားသော တိရိစ္ဆာန်တဝတ်ခန့်၊ သိုးကောင်အရွယ်အစား သယ်ဆောင်ရာတွင်၊ နောဧ၏သဘောF၌ “သီးသန့်အခန်းတဝတ်ခန့်သာရှိသည်။ (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender's Study Bible, World Publishing, 1995. p. 21; note on Genesis 6:15).
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် နောဧ၏အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားရခြင်းသည် ဒေါက်တာ အာချာဖေါ်ပြသကဲ့သို့ လာမည့်အနာဂတ်ပုံရိပ်သည် ယေရှုခရစ်တော် ဘုရား၌ ပြည့်စုံလာမည်ဖြစ်သောကြောင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ၊
“လူသားသည် ကြွလာသောအခါ နောဧလက်ထက်၌ဖြစ်သကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့် မည်” (မဿဲ၂၄း၃၇)။
သခင်ယေရှုခရစ်တော်က၊ ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်၍ကြွလာသောအခါ ရေလွှမ်းမိုး ခြင်းမတိုင်မှီက နေ့ရက်ကဲ့သို့ ကမ္ဘာပေါ်၌ပျက်မည်ကို မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် နောဧခေတ်တုန်းက အခြေအနေကို ထပ်ခါတလဲလဲဖေါ်ပြနေခြင်းသည် ကမ္ဘာကြီး၏ နေ့ရက်အဆုံးကို ကျွန်ုပ်တို့အားသိစေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နမိတ်လက္ခဏာတခုဖြစ်ပေါ် လာတိုင်းနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလ၌ ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသည်ကို သိစေလို၍ ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၀၅ခုနှစ်၊ နယူးယောက်မြို့တော် နောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်စစ်ပွဲ၌ ဘီလီဂ ရေဟမ်အမှန်တကယ်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာတော်၌” “အသစ်တဖန် မွေးဖွါးခြင်း”အကြောင်းကို ကိုးကြိမ်တိုင်အောင်ဖေါ်ပြထားပါသည်ဟုဆို၏ နောင်တ ရခြင်းကိုမူကား အကြိမ်ခုနှစ်ဆယ်တိုင်အောင်ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကြိမ်နှစ်ဆယ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။”(သို့သော် ခရစ်တော်ဘုရားဒုတိ ယအကြိမ်ကြွလာခြင်းကိုမူကား၊ အကြိမ်တစ်ရာခန့်ဖော်ပြထားပါသည်။” (Living in God's Love: The New York Crusade, G. P. Putnam's Sons, 2005, p. 109).
သခင်ယေရှုခရစ်တော်မိန့်တော်မူသည်ကား၊ နောဧခေတ်တုန်းက အသက် ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်နည်းတူ သခင်ကြွလာသောအခါ ထိုကဲ့သို့နေထိုပြုမူကြလိမ့် မည်ဟု မိန့်တော်မူပါသည်။
“လူသားကြွလာသောအခါ၊နောဧလက်ထက်၌ဖြစ်သကဲ့သို့ဖြစ်လာလိမ့် မည်” (မဿဲ၂၄း၃၇)။
ဤဒေသနာတော်၌(၁)နောဧခေတ်က လူသားတို့၏အခြေအနေ(၂)နောဧကယ်တင် ခြင်းရရှိခြင်းဟူသော အကြောင်းအရာကို အဓိကထားဟောကြားပါမည်။
၁။ ပထမ၊နောဧခေတ်လူသားတို့၏ အခြေအနေ
နောဧခေတ်လူသားတို့မည်ကဲ့သို့ အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြပါသနည်း? သမ္မာကျမ်းစာ၌ မိန့်တော်မူရာတွင်၊
“မြေကြီးပေါ်မှာ လူအပြစ်ကြီး၍၊ သူ၏စိတ်နှလုံးအကြံအစည်ရှိသမျှ တို့သည် အစဉ်မပြတ်ဆိုးညစ်ခြင်းသက်သက်ရှိကြောင်းကို ဘုရား သခင်သိမြင်တော်မူလျှင်” (ကမ္ဘာ၆း၅)။
ထိုခေတ်၌လူသားတို့၏ စိတ်နှလုံးသားထဲ၌ “မကောင်းမှု”ကိုသာဆက်၍ ပြုမူခဲ့ကြသည်။ ညအိပ်ရာဝင်သောအခါ၊ မိမိတို့စိတ်ထဲ ထိုမကောင်းမှုကိုသာ တွေး တောခဲ့ကြ၏ နံနက်အိပ်ရာနိုးသောအခါ၌လည်း ထိုသူတို့၏စိတ်နှလုံးသားအကြံ အစည်သည် မကောင်းမှုဒုစရိုက်နှင့်သာ ပြည့်နှက်နေပါသည်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်း၆း၅၌ မက်သဒက်အသင်းတော်ကို တည်ထောင်သူဂျွန်ဝီစလီက “မူလဗီဇအပြစ်”နှင့်ပါတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
မကောင်းမှုဟူသမျှတို့သည် ခေတ္တအနားယူနေသည်ဟူ၍ ယုံကြည်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့၌အကြောင်းတစုံတရာမရှိပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မကောင်းသော အတွေးအခေါ်အကြံအစည်စိတ်ထဲရှိသမျှ ဘုရားသခင်မြင်တော်မူ သည် ဆက်လက်ပြီးမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုသာ ပြုမြဲပြုနေသည်ကို လည်းဘုရားသခင်မြင်တော်မူသည်။ နှစ်တိုင်း၊ နေ့တိုင်းနာရီတိုင်း၊ မကြာခဏဆိုသလိုပင် ဘုရားသခင်သိမြင်နေပါသည်။ (လူသား) သည်အကောင်းမှအဆိုးဖက်သို့ သွေးဖီသည်၊ ထိုကြောင့် ဘုရား သခင်သည် လူသားတို့အပေါ်သို့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကျရောက်စေပါသည် ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ထိုအရင်ကကဲ့သို့ နေထိုင်သည် မထိုင်သည်ကို ကြည့်ရှုနေပါသည်။ (John Wesley, M.A., “Original Sin,” The Works of John Wesley, Baker Book House, 1979, volume VI, p. 59).
မစ္စတာဂျွန်ဝီစလီမှတ်ချက်ချရာတွင်၊ ယနေ့ခေတ်လူတို့သည်လည်း ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမ တိုင်မီ၊ ဗီဇအပြစ်လွှမ်းမိုးစဉ်ကာလ၌ အသက်ရှင်နေကြသကဲ့သို့ပင်အသက်ရှင်နေကြ သည်ဟုဆို၏။ ထိုသူကပြောကြားရာတွင် လူတို့သည် မာန်မနနှင့်ယစ်မူးကြပြီး “စာ တန်မာန်နတ်ကလည်း သူ၏လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ကို လူသားတို့၏စိတ်နှလုံး သားထဲပုံတူတံဆိပ်ရိုက်ထားပြီးဖြစ်သည်”။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင် ထက် ဤလောကအရာကိုပို၍ ချစ်မြတ်နိုးကြခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိတို့၏တပ်မက်ခြင်း ဖြင့် “စိတ်နှလုံးသားထဲက အကြံအစည်အတိုင်းတပ်မတ်လိုချင်လျှက်ရှိကြသည်” ထိုသူကဆက်၍ လူတို့သည်ဘုရားမဲ့နေလိုခြင်း၊ ညစ်ညူးစွာကျင့်ခြင်း၊မာန်မာန ထောင်လွှားခြင်း၊ မိမိဆန္ဒအလျှောက်နေလိုကြခြင်းနှင့် လောကကိုသာချစ်မြတ်နိုးကြ ၏ဟူ၍ဆိုသည်။
နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏ အပြုအမူတို့သည် လူသားတို့၏သဘောသ ဘာ၀ကို လွှမ်းမိုးပါသလား? အကောင်းဘက်ကိုပြုမူနေထိုင်နိုင်ခြင်း မရှိတော့ပေဘူးလား? သူသည်လုံးလုံးကျဆုံးနေပြီလား? (ကျွန်ုပ်တို့ ၏ကျမ်းကိုအရ၊ မကောင်းမှုကို ဆက်လက်ပြီးတွေးတောလုပ်ဆောင် နေပါသလား? ဤအရာများကို ထောက်သော်သင်သည်အဝေး၌ရှိ သောခရစ်ယာန်ပင်ဖြစ်၏၊ ထိုထက်မက၊ သင်သည်ဘုရားမဲ့လူသား ဖြစ်နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ (ibid., p. 63).
မစ္စတာဝီစလီပြောကြားခြင်း မှန်ကန်သည်မဟုတ်ပါလား? သင်ကောအ ဘယ်သို့နည်း? ဘုရားသခင်သည် သင်၏စိတ်ကူးထဲအချိန်တိုင်းမရှိဘူးဆိုခြင်း မှန်သည်မဟုတ်ပါလား? သင်သည်ဘုရားသခင်ကို ချစ်ရမည့်ထက်၍ လောကအ ရာကိုပို၍ ချစ်နေသည်ဟုဆိုခြင်းသည် မှန်ကန်နေသည်မဟုတ်ပါလား? သင်သည် ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ်မချစ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလား? သင်သည် ထိုအရာများကို ဝန်ခံဖို့ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနေသည်မဟုတ်ပါလား? သင့်နှလုံးသားသည် တပ်မတ်ခြင်းနှင့်ပြည့်နေသည်မဟုတ်ပါလား? “စာတန်မာန်နတ်က မိမိ၏ပုံတူကို (သင့်)နှလုံးသား ထဲတံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ထားပြီးမဟုတ်ပါလား?”
“သို့သော် ထိုကဲ့သို့အစဉ်တစိုက်လူသားတို့၏ အခြေအနေဖြစ်နေသည်မဟုတ် ပါ”ဟူ၍ သင်ပြောကောင်းပြောနိုင်ပါသည်။ ထိုအရာမှန်ပေသည်။ သို့သော်အား နည်းလိမ်ညာမှုရှိနေသည်၊ နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလ၌ ဝိညာဉ်တော်၏ အထူးအပြစ်ကိုဖေါ်ပြချက်တို့kကို ငြင်းပယ်သောသူတို့ အမှန်ရှိနေကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ နောဧခေတ်၌လည်းအမှန်ရှိခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ဘုရားသခင်မိန့်တော် မူသည်ကား “ထာ၀ရဘုရားကလည်း ငါ့ဝိညာဉ်သည် လူတို့တွင်အစဉ်မဆုံးမရ” (ကမ္ဘာ၆း၃)ဟု မိန့်တော်မူပါသည်။ နောဧခေတ်လူတို့သည် ဝိညာဉ်တော်မိမိ၌ အစဉ်ရှိနေဖို့ တွန်းလှန်ကြသည်! ယနေ့ထိတိုင်၊ ထိုကဲ့သို့ ခရစ်ယာန်သမိုင်းတ လျှောက် မှန်ကန်လျှက်ရှိနေပါသည်မဟုတ်ပါလား?
ပြန်တွေးကြည့်ပါ၊ မကြာသေးမှီနှစ်ကာလအတွင်း ထောင်ပေါင်းများစွာသော လူတို့သည် အသင်းတော်၌ပါဝင်လာကြသည်၊ ဘုရားမဲဘ၀ကိုစွန့်ပြီး အသင်းတော် သို့လာရောက်ခဲ့ကြသည်။ မကြာသေးသောနေ့ရက်တို့၌ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တို့သည် “အသက်နှင့်ပြည့်စုံလျှက်မှန်တော်မူသော ဘုရားသ ခင်၏အမှုတော်ကို သင်တို့သည်ဆောင်ခြင်းငှါ၎င်း” (၁သက်၁း၉)ဟူ၍ ဘုရားသခင် ထံတော်ပါးသို့ ချဉ်းကပ်လာကြပါသည်။ အမှောင်ထုလွှမ်းမိုးသော အလယ်ခေတ်၌ သန်းနှင့်ချီသောခရစ်ယာန် ယုံကြည်သူတို့သည် ညှဉ်းဆဲခြင်းအမျိုးမျိုးခံရသကဲ့သို့ ယနေ့အနောက်နိုင်ငံများ၌ ထိုကဲ့သို့သော ခရစ်ယာန်များတို့ကို မတွေ့ရတော့ပေ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလ၌ လူတို့သည် ဘုရားသခင်ကိုဆာငတ်သောကြောင့် အကျဉ်းချခြင်းကို မကြာခဏခံခဲ့ကြရသည်။ ခရစ်တော်ကိုငြင်းပယ်ကြမည့်အစား မီးအရှို့ခံခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းမျိုး မည်သည့်တိုင်းနိုင်ငံ၌ တွေ့မြင်ကြရမည်နည်း? နိုးကြားခြင်းအကြီးမားဆုံးကာလ သုံးကြိမ်တွင်မြောက် များစွာသောလူတို့သည် မိမိတို့၏အပြစ်တို့ကို နောင်တရလျှက် အသစ်သော အသက်တာ၌ပြောင်းလဲကြပြီး ယေရှုကိုယုံကြည်ကိုးစားလာခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယနိုး ကြားရေးကာလ နှစ်ကြိမ်မြောက်၌ကဲ့သို့၊ ယနေ့အနောက်ကမ္ဘာ မည်သည့်နိူင်ငံတို့ တွေ့ရသနည်း? ၁၈၁၄၊ ကော်ဝေလ်နိုးကြားရေးကဲ့သို့ မည်သည့်နေရာ၌ ကျွန်ုပ်တို့ ယနေ့တွေ့မြင်ကြ မည်နည်း?
ရာချီသောသူတို့သည် သနားခြင်းဂရုဏာတော်ကို ငိုယိုတောင်း လျှောက်ခဲ့ကြသည်။ တချို့သောသူတို့သည် တစ်နာရီခန့်မျှစိတ် နှလုံးရှုပ်ထွေးခံစားခဲ့ရသည်။ အချို့တို့မူကားနှစ်နာရီအထိ၊ အချို့ တို့သည် ခြောက်နာရီ၊ အချို့သောသူကားကိုးနာရီအထိ၊ အချို့ ဆိုရင်ဆယ့်နှစ်နာရီ၊ အချို့တို့ကား၊ သခင်ဘုရားသူတို့ကို ငြိမ်သက် ခြင်းမသွန်းလောင်းမှီတိုင်အောင် တစ်ဆယ်ငါးနာရီခန့် ဝိညာဉ်ပူ ဆွေးသောကရောက်ခဲ့ကြ၏။ ပြီးနောက်ထိုသူတို့သည် မတ်တပ်ရပ် လျှက်လက်မြောက်ကာ အံ့ဖွယ်သောဘုရားသခင်၏အမှုတော်ကိုကြွေး ကြော်ခဲ့ကြသည်။လူအုပ်မှောက်လဲကျကုန်၏ မိမိတို့၏ဝိညာဉ်အဖို့ငို ကြွေးခဲ့ကြ၏ (quoted in fire From Heaven by Paul E. G. Cook, Evangelical Press, 2009, p. 80).
ထိုကဲ့သို့ ဝိညာဉ်တော်၏လှုပ်ရှားမှု မည်သည့်အသင်းတော်၌ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြရ မည်နည်း? ထိုကဲ့သို့ ပြောင်းလဲခြင်းကို မည်သည့်နေရာ၌ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ကြရ မည်နည်း?
စစ်မှန်သောဘုရားရှင်ကို သိခြင်းမရှိ၊ မိမိ၏အပြစ်ဒုစရိုက်အတွက် ဘာကိုမှစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲ့ အသက်ရှင်နေထိုင်သူတဦးသည် နံနက် အာရုံဏ်တက်ချိန်၌တွင် ဘုရားသခင်ရှိကြောင်း နားလည်းခဲ့သူတစ် ဦးရှိခဲ့သည်။ သူသည်သေမထူးနေ့မထူးအသက်ရှင်လာခဲ့ပြီး၊ မိမိ၏ အပြစ်ကို သိနားလည်ခြင်းနှင့်အတူ ဘုရားသခင်ကို ရှာဖွေလာခဲ့ သည်။ မိမိ၏အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရသည်အထိ နောင်တတရားရပြီး ယေရှုခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက္ခံယုံကြည်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်သူသည် ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးက မစခြင်းဂရုဏာတော်ကို ခံစားလာရသည်၊ သူ၏အပြစ်လည်း ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ထိုအခါသူသည် ကြီးမားသောဝမ်းမြောက်ခြင်း အမှန်တကယ်ခံစား လာခဲ့ပါသည်။ (Cook, ibid., p. 19).
ထိုကဲ့သို့သော အသက်တာပြောင်းလဲခြင်း ယနေ့အနောက်နိုင်ငံ မည်သည့်အသင်း တော်၌ တွေ့ရကြသနည်း? ယနေ့ထိုကဲ့သို့သော မတွေ့မမြင်ကြရခြင်းသည် နောဧ ခေတ်တုန်းကကဲ့သို့ ဝိညာဉ်တော်ကို တွန့်လှန်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်!
“လူသားသည်ကြွလာသောအခါ နောဧလက်ထက်၌ဖြစ်သကဲ့သို့ဖြစ် လိမ့်မည်” (မဿဲ၂၄း၃၇)။
၂။ ဒုတိယ၊ နောဧကိုယ်တိုင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိခဲ့သည်
ကမ္ဘာလောတခုလုံးသည် ရုပ်လောကနှင့်ဆိုင်သော ရုပ်ဝါဒကိုသာစိတ် ဝင်စားလျှက်ရှိနေပေပြီ။”ရုပ်ဝါဒ”ဟူ၍ ဆိုလိုရာတွင်၊ လူသားတိုင်းသည် ရုပ်ဝတ္ထု ကိုသာ အဓိကထားလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ထိုလူသားတို့၏ အတွေးအခေါ်ထဲ၌မ နှစ်မြှပ်ခဲ့ပေ၊ ထိုသူတို့သည် မိမိတို့ဘ၀ကောင်းစားရေးကိုသာ အဓိကထားကြသည်။ မျက်မှောက်ဘ၀ကိုသာ အဓိကထားစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ ယေရှုဘုရားသည် ထိုအ ကြောင်းအရာနှင့်ပါတ်သတ်၍ မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။
“လူသားသည်ကြွလာသောအခါ နောဧလက်ထက်၌ဖြစ်သကဲ့သို့ ဖြစ် လိမ့်မည်။ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမဖြစ်မှီကာလ၌ နောဧသည်သဘောFထဲသို့ ဝင်သောနေ့တိုင်အောင် လူများတို့သည် စားသောက်လျှက်၊ ထိမ်းမြှား စုံဖက်လျှက်နေ၍ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းရောက်သဖြင့် လူခပ်သိမ်းတို့ကို သုတ်သင်ဖယ်ရှင်းသည့်နေ့တိုင်အောင် သတိမေ့နေကြသည် နည်းတူ လူသားကြွလာသောအခါ၌ ဖြစ်လိမ့်မည်။ (မဿဲ ၂၄း၃၇-၃၉)။
ယေရှုခရစ်က ထိုသူတို့၏ “မှားယွင်းသောအတွေး”ကိုဖေါ်ပြလေ့မရှိသည်ကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလှပါသည်(ကမ္ဘာ၆း၅)၊ထိုသူတို့၏ “အဓမ္မမှု”ကို ခရစ်တော် ဘုရားဖေါ်ပြလေ့မရှိပါ(ကမ္ဘာ၆း၁၃)။ ခရစ်တော်ဖေါ်ပြထားသည်မှာ၊ “စားသောက် လျှက်၊ ထိမ်းမြှားစုံဖက်လျှက်နေ၍ ဟူ၍သာဖေါ်ပြထားပါသည်။ (မဿဲ၂၄း၃၈)။ စားသောက်ခြင်း၊ ထိမ်းမြှေားစုံဖက်ခြင်းသည် ထိုသူတို့သည် ဒေါက်တာမက္ကီးပြော ကြားခဲ့သည့်တိုင်း “ဘုရားမရှိဟူသော အတွေးအခေါ်”အားဖြင့် အသက်ရှင်ခဲ့ကြ သည်။ ထိုသူတို့သည် မိမိတို့၏အပြစ်ကို တရားစီရင်လိမ့်မည်ဟု မထင်ထားခဲ့၊ ရေအားဖြင့်လည်းပျက်ဆီးမည်ဟူ၍ မထင်ခဲ့ပေ၊” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume IV, p. 132; note on Mathew 24:28, 29). ယနေ့တွင်လည်း ထိုကဲ့သို့အသက်ရှင်ကြသည်။ ဟီးလ်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်ဝါရှင်တန်ဒီစီ၏ သင်းအုပ်ဆရာ မာခ်ဒီဗါမကြာသေးခင်ပြောကြားခဲ့ သည်မှာ၊ “ထောင်ချီသို့မဟုတ်သန်းနှင့်ချီသောအသင်းတော်သူ၊ သားတို့သည် စစ်မှန်စွာအသက်တာမ ပြောင်းလဲခဲ့ကြပေ”။
ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား၊ “ရေလွှမ်းမိုးခြင်းရောက်သဖြင့် လူခပ်သိမ်းတို့ကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည့်တိုင်အောင်သတိမဲ့နေကြသည်” (မဿဲ၂၄း၃၉) အို၊ မကြာမှီ သူတို့သည်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကို အမှန်တကယ်ခံစားခဲ့ရသည်။ ထိုအခါ ထိုသူတို့သည် သဘောFကိုသာ တွေ့မြင်ခဲ့ကြသည်။ နောဧ၏သတိပေးသံကို သူတို့ဆက်ဆက်ကြား ခဲ့ပါသည်။ ထိုသူအား ရှင်ပေတရုက “ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ဟောသောသူ” ဟူ၍ခေါ်ဆိုပါသည်(၂ပေ ၂း၅)။ ဖျက်ဆီးခြင်းကျရောက်လာမည့် သတိပေးသံကို ထိုသူတို့ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့တိုင်အောင် “ရေလွှမ်းမိုးခြင်းရောက်သည့်တိုင် သတိမေ့ နေကြသည်” ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် “သိခဲ့ခြင်း”အား သတိထားသည်၊ သတိပြုသည်ဟုဖေါ်ပြသည် (အထူး သဖြင့်)။ ဒေါက်တာရိန်နက်ကာ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “သူတို့၏အသက်တာ၌ ရောက်ရှိလာမည့် ဖျက်ဆီးခြင်းဘေးတစုံတရာကို စဉ်းစားခြင်း၊ ပါတ်သက်လိုခြင်း မရှိ”ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့သည်” (Fritz Rienecker, Ph.D., A Linguistic Key to the New Testament, Zondervan Publishing House, 1980 edition, p.72; note on Matthew 24:39). ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့ရက်ကာလအတွက် ပုံရိပ်ပင်ဖြစ်သည်!
နောဧလက်ထက်၌နောက်ဆုံးသော လူသားတို့၏နေ့ရက်ကာလကို ကြိုတင် ဖေါ်ပြထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နောဧလက်ထက်ကကဲ့သို့ အချို့သောသူတို့လည်း အသက်ရှင်နေကြမည်ဟု ယနေ့ညယုံကြည်ပါသည်! မိတ်ဆွေလည်းနောက်ဆုံးသော ကာလအတွက် သတိပေးသံကြားကောင်းကြားနေပေမည်။ ထိုသတိပေးသံက သင့် အား”သတိရှိစေ”သည်။ ရောက်ရှိလာမည့် ဖျက်ဆီးခြင်းအား သင်သိသော်လည်း “သင်၌သတိမရှိ” ဖြစ်နေကောင်းဖြစ်နေမည်၊ ထိုသတိပေးသံကို ကြားရသောအခါ၊ သင်အသက်တာပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ “ရေလွှမ်းမိုးခြင်းရောက်သ ဖြင့်လူခပ်သိမ်းတို့ကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည့် နေ့ရက်တိုင်အောင် သတိမေ့နေကြ သည်။ (မဿဲ၂၄း၃၉)ဟူ၍ သတိပေးထားသည်။ လူအများတို့သည် ရုပ်ဝတ္ထုနောက် သို့သာပြေးလိုက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် စားသောက်ခြင်း၊ ထိမ်းမြှားစုံဖက်ခြင်းကို ပြုကြ၍ ဘုရားသခင်ကို မကြောက်ရွှံ့ခဲ့ကြပေ။ မိတ်ဆွေကော အဘယ်ကဲ့သို့နည်း?
နောဧသည်ကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ရသည်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း၌ မိန့်တော်မူသည်မှာ၊
“နောဧမူကား၊ ထာ၀ရဘုရားစိတ်တော်နှင့်တွေ့သောသူဖြစ်သတည်း” (ကမ္ဘာ၆း၈)။
“သင်သည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ မျက်နှာရပြီ”ဟူ၍ ကောင်းကင်တမန်တော်က မာရိအားမိန့်တော်မူခြင်းကို လုသာနှိုင်းယှဉ်ဖေါ်ပြရာတွင်၊ “ထိုကဲ့သို့ မိန့်တော်မူခြင်း ဟူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ဆောင်ချက်တို့ကို ပယ်ထားလျှက်ရှိပြီး ထိုသို့မိန့်ကြားခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်၌ မျက်နှာသာရရှိ ကြခြင်းဖြစ်သည်” (Luther's Commentary on Genesis, Zondervan Publishing House, 1958 edition, volume I, p. 138). အာသာဒဗလျူပိန့်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “နောဧသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်သကဲ့သို့ အပြစ်သားအားလုံး တို့လည်း ထိုအတူပင်ဖြစ်ကြသည်။” (Arthur W. Pink, Gleanings in Genesis, Moody Press, 1981 edition, p. 97).
နောဧ၏အသက်တာကို ဆန်းစစ်လေ့လာသောအခါ ဦးစွာသူသည်ကျေးဇူးတော် အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်၍ လေ့လာသောအခါ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရမည်။
“နောဧသည်မမြင်သေးသော အမှုအရာတို့ကို ဖေါ်ပြသောအမှုအရာတို့ ကိုခံရပြီးမှ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကြောက်ရွှံ့သောစိတ်ရှိ၍...” (ဟေဗြဲ ၁၁း၇)။
ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်က နောဧအားကြောက်ရွှံ့ခြင်းဖြင့် အသက်တာကိုရွှေ့ လျားစေသည်။ (၁၇၂၅-၁၈၀၇)ဂျွန်နယူးတန်သီကုံးထားသကဲ့သို့ “အသက်တာခရီး ကြောက်ဖွယ်လမ်းမှာ” (အံ့ဩဖွယ်ကျေးဇူးတော်) ဟူ၍ သီကုံးရေးသားခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကသာလျှင် အပြစ်သားတို့၏ နှလုံးသားကို တို့ထိပြီး ကြောက်ရွှံ့ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်စေနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးက ကျေးဇူး တော်မသက်ရောက်သေးခင် လူ၌ကြောက်ရွှံ့ခြင်းမရှိတတ်ပါ၊ ကျေးဇူးတော်တို့ထိ ခြင်းမရှိသော သူတို့အားရှင်ပေါလုက ပြောကြားရာတွင် “ဘုရားသခင်ကို ကြောက် ရွှံ့ရသောအကြောင်းသည် သူတို့မျက်စိ၌မထင်ဟု ကျမ်းစာလာသတည်း” (ရောမ ၃း၁၈)ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
တဦးတယောက်က ကျွန်ုပ်အား”ကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်ကိုမကြောက်ပါ” ဟူ၍ ပြောခဲ့ဖူးသည်။ ထိုသို့မကြောက်ရွှံ့ရခြင်းသည် ထိုသူသည်ပုံမှန်လူမဟုတ်သေးသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သေးပါဟူ၍ အားလုံးကိုမဆိုလိုပေ၊ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်က ထိတို့ခြင်းမခံရသေးသူကိုသာ ဆိုလိုပါသည်။ အကြောင်းမှာ ကျေး ဇူးတော်သည် သင့်နှလုံးသားကို တို့ထိသင်ကြားပေးနေသည် “ဂျွန်နယူတန်သီကုံး သကဲ့သို့ “ကြောက်ရွှံ့တတ်ဖို့” သင်ကြားပေးနေပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူး တော်ကိုမသိဘဲ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွှံ့ခြင်း သင်၏မျက်စိ၌မထင်ပေ” ဘုရား သခင်ကျေးဇူးတော် သင့်အပေါ်ဆင်းသက်သောအခါမူ သင်သည်သင်၏အပြစ်အ ကျိုးကြောင်း သိနားလည်လာမည်။ သင့်အပြစ်မှ သင်မလွှတ်မြောက်နိုင်ပေ! ဒေါက် တာဂျေးဂရေဆန်မက်ချန် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “မိမိ၏အပြစ်အကျိုးရလဒ်ကို နား လည်ပါက ထိုသူသည်အသက်တာတခုလုံးပြောင်းလဲမည်ဖြစ်သည်” (J. Gresham Machen, D.D., Christianity and Liberalism, Eerdmans Publishing Company, 1990 edition, p. 67).
အပြစ်အကျိုးရလဒ်အတွေ့အကြုံမတိုင်ခင်၊ သင်သည်မည်သို့ အသက်တာ ပြောင်းလဲရမည်ကို စဉ်းစားနေပေလိမ့်မည်။ လူငယ်တဦးက ကျွန်ုပ်အားပြောကြား ခဲ့ဖူးသည်မှာ “ကျွန်ုပ်မှားယွင်းမှ အသက်တာပြောင်းလဲခဲ့သည်အတွက် ကျွန်ုပ် ကြောက်ရွှံ့မိသည်” ဟူ၍ ဆို၏သူသည်မှားယွင်းနေမှုကိုသာ ကြောက်ရွှံ့ခြင်းဖြစ်၏! ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွှံ့၍မဟုတ်ပေ။ အပြစ် ၏အကျိုးရလဒ်ကို ကြောက်ရွှံ့၍မ ဟုတ်ပေ။ ကြောက်ရွှံ့ဖွယ်အခြေအနေကြေင့် နိုးကြားခြင်းအသိမရှိပါ! “ဘုရားသခင် ကိုကြောက်ရွှံ့ခြင်းအရိပ်အမြွတ်(သူ့)မျက်စိ၌ မထင်ပေ”! သို့သော် သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာသောအခါ သင်တို့၏အပြစ်ကို ဖေါ်ပြပေးပါမည် (ယော ယန်၁၆း၈)။ ထိုအခါသင်သည် ကြောက်ရွှံ့လာမည်၊ သင့်အသက်တာတခုလုံး ပြောင်းလဲ လာပါလိမfhမည်”ဟူ၍ ဒေါက်တာမက်ချန့် ပြောကြားသကဲ့သို့ဖြစ်လာမည်။
ထိုကဲ့သို့ နောဧသည်အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကပဲ ပြင်ဆုံးမသောအခါ သူသည်”ကြောက်ရွှံ့သောစိတ်ရှိ၍ မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှါ သဘောFကိုတည်လေ၏” (ဟေဗြဲ၁၁း၇)။ အပြစ်အတွက်ပဲပြင်ဆုံး မခြင်းခံရသောအခါတွင်မူ သင်သည်ကယ်တင်ခြင်းဖို့အလို့ငှါ သဘောကဲ့သို့သော ခရစ်တော်သခင်ထံတိုးဝင်ချဉ်းကပ်လာပါလိမ့်မည်! တွေးတောကြည်ပါလူသားတို့! သင့်အပြစ်အကျိုးအပြစ်ကိုတွေးကြည့်ပါ! သင့်အပြစ်အဖို့၊ တရားစီရင်မည်ကိုလည်း စဉ်းစားတွေးကြည့်ပါလေ! “အကျွန်ုပ်လွန်ကျူးပါပြီ” (ဆာလံ၅၁း၃)ဟူ၍ ဘုရား သခင်ကို ဟစ်ခေါ်ပြီး သင့်အပြစ်အတွက် ဝန်ချလိုက်ပါ။
ကယ်တင်ခြင်းသဘောFဆီသို့ လှမ်းလာပါ၊ ယေရှုသည်သင့်အပြစ်အတွက် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် သေခံပေးပြီးဖြစ်၍ သင့်၏အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်ခဲ့ပါပြီ။ ယေရှု သခင်ကိုကိုးစားပါ၊ သင့်အပြစ်ကိုအသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြောပါ။ မည်ကဲ့သ့ ယေရှုကိုယုံကြည်ကိုးစားရမည်ကိုသာ စဉ်းစားတွေးတောပါ! သင့်အပြစ်ဖုံးလွှမ်း သောအခါ သင်သည် “မည်ကဲ့သို့”ယေရှုခရစ်ကို ကိုးစားယုံကြည်ရမည်ကို စဉ်းစား တွေးတောနိုင်မည်မဟုတ်ပေ! အို၊ “ကြောက်ရွှံ့ခြင်း”နှင့် သင့်အသက်တာ ကယ်တင် ခြင်းရရှိဖို့ ကယ်တင်ခြင်းသဘောFတည်းဟူသော ယေရှုခရစ်တော်ထံတိုးဝင်းချဉ်းကပ် လိုက်ပါ! ဒေါက်တာမတ်ဆန်ပြောကြားသကဲ့သို့ပင် အသက်ရှင်ပါ။
လူသည်မိမိ၏အပြစ်ပဲဖြင့်ဆုံးမခြင်းခံယူသောအခါ၊ သူ၏အသက်တာ တခုလုံးသည်ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ မိမိသည်ဝိညာဉ်မျက် စိကန်းနေသည်ကို အံ့ဩလာပါလိမ့်မည်။ ပုံပြင်ပမာသာတင်ထားခဲ့ သည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသည်လည်း õဤအချိန်တွင်(အသက် ဝင်လာပါလိမ့်မည်)။သို့သော် ဤသို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုပေးတော်မူသော သူသည် ဘုရားသခင်တပါးတည်းသာဖြစ်သည်။ (Machen, ibid.).
သင့်အပြစ်ပဲပြင်ဆုံးမခြင်းရရှိဖို့ ဆုတောင်းပါ! ဘုရားသခင်သင့်အပြစ်ကို ဆုံးမခြင်း မရှိပါလျှင်၊ သင်သည်လည်း နောဧခေတ်ကကဲ့သို့ “ရေလွှမ်းမိုးခြင်းရောက်သဖြင့် လူခပ်သိမ်းတို့ကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည့်တိုင်အောင် သတိမေ့နေကြသည်” (မဿဲ ၂၄း၃၉)ကဲ့သို့ ဖြစ်နေပေမည်။
အကယ်၍ သင်သည်စစ်မှန်စွာ အသက်တာပြောင်းလဲသော ခရစ်ယာန်မ ဟုတ်သေးပါလျှင် သင့်အားဆုတောင်းပေးပါမည်၊ သွန်သင်လမ်းပြပေးပါမည်။ ဒေါက်တာကေကန်က တိတ်ဆိတ်သောအခန်းထဲ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး သင့်အား ဆုတောင်းပေးပါလိမ့်မည်။ အာမင်
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာဂရိတန်အယ်ချန်မှ ရှင်မဿဲ၂၄း၃၆-၄၂အထိကို
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၉၀၂-၁၉၇၂)
ရိုကေယာဂျုံးသီကုံးသော “ယနေ့နေ့ရက်ကာလ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေး
နောဧသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီး အခြားသောသူတို့ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးခဲ့ရသည်။
“လူသားသည်ကြွလာသောအခါ နောဧလက်ထက်၌ ဖြစ်သကဲ့သို့ဖြစ် လိမ့်မည်” (မဿဲ၂၄း၃၇)။
၁။ ပထမ၊ နောဧခေတ်လူသားတို့၏ အခြေအနေ၊ ကမ္ဘာဦး၆း၅၊ ၁သက် ၁း၉
၂။ ဒုတိယ၊ နောဧကိုယ်တိုင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိခဲ့သည်။ မဿဲ၂၄း၃၇-၃၉၊ ကမ္ဘာဦး၆း၅၊ ၁၃၊ ၂ပေ၂း၅၊ ကမ္ဘာဦး၆း၈၊ လုကာ ၁း၃၀ ဟေဗြဲ၁၁း၇၊ ရောမ ၃း၁၈၊ ယောဟန် ၁၆း၈ ဆာလံ၅၁း၃။